जो भन्यो उही न्यायाधीश चाहिने भए किन चाहियो अदालत?
केपी शर्मा ओली शनिबार, पुस २५, २०७७, १८:००
तपाईंहरु (आफू पक्षीय कार्यकर्ताहरु)को उत्साह देखेर लोकतन्त्रविरोधी शक्ति आत्तिएका छन्। उनीहरुका सपना खेर गएका छन्। देशभक्त शक्तिहरु, लोकतान्त्रिक शक्ति र गणतन्त्रका शक्ति विश्वस्त भएका छन् र हौसला पलाएको छ। विभिन्न षडयन्त्र गर्ने शक्ति, देशलाई बिगार्ने र लोकतन्त्र, राष्टियतालाई कमजोर पार्ने शक्ति तिलमिलाएका छन्।
तपाईहरुलाई आश्चर्य लागेको छ, देशलाई सम्झौता गर्ने फोहोरी खेल, विकासको गति अघि बढ्न नदिने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास गर्ने शक्तिहरुको सपना प्रतिनिधिसभा विघटनबाट समाप्त भएको छ।
संसद विघटन गरेर देश संकटमा पर्‍यो रे! संसदको निर्वाचन नगर्ने हो र? संसदको निर्वाचन गर्दा केही स्वार्थी तत्वको स्वार्थमा असर पर्छ। संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने संवैधानिक निकायलाई क्रियाशील हुन नदिने प्रयासहरु कति भए कति!
आयोगहरु रिक्त ३ वर्षदेखि छन्। सदस्यहरु भर्न सकिँदैन। सहमतिबाट बैठक बस्ने भन्यो, बस्नै नदिने। मेरो मान्छे परेन भनेर एउटै रट गरेर रोकियो। आज अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकाय भरेका छौँ। अरु पार्टी फुट्छन् भन्ने डरले पार्टीभित्र कोकोहोलो भयो। नजानेर होइन, वहाँहरु आत्तिएर यसरी चिच्याउनु भयो। यस पटक जारी गरेर मैले संवैधानिक पदहरु पूर्ति गरेको छु। मेरो खुट्टा समाउँदा समाउँदै केही काम गरेको छु। आगाडी बढ्नै नदिने भएपछि अघि बढ्न परेन?
कानुन लगेर संसद्‍मा लाग्यो थन्कायो। कानुन बनाउनै नदिने, पास हुनै नदिने। तीन वर्षदेखि संसदमा कानुन रोकिएका छन्। समितिमा छानी छानी समितिको सभापति बनाए। तर अन्यत्रको सम्झेर आदेश दिन थाले। देशको २ वर्ष खेर जान हुँदैन भनेर चुनावमा जानपर्छ भनेर संसद विघटन गरेको हुँ।
वैशाखपछि राजनीतिमा रहँदैन भनेर मेरो भविष्यवाणी गरेका छन्। महान् जनयुद्ध भनेकै हो के भो त? यिनीहरुले जनतालाई जातजात र भाषाभाषामा फुटाउन खोजेका थिए। विखण्डनकारीहरुलाई हामीले वार्ताद्वारा समाधान गर्‍यौं। तीन तिरबाट बाटो खोलेका छौँ। हामीसँग बहुमत थिएन। विगतमै मैले धेरै काम गर्ने थिएँ तर मलाई हटाइयो। समय रोकिएको छैन। यो एउटा प्रक्रिया हो। हामी यही छौँ भनेर कुन सन्दर्भमा भनेको थियौँ अहिले सडकमा गएर यहाँ छौ भन्नु भएको छ। उहीँ बसे हुन्छ। बारम्बार जाँदै गरेर उतै बसे हुन्छ।
'हामी यहाँ छौं' भन्ने वाक्यांश मैले कुन सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, उहाँहरूले कुन सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवधानिक भएको भनी हल्ला चलाइएको छ। एकपटक अदालतमा जागिर खाएकै भरमा यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर प्रचार गर्नुभएको छ। एकपटक जागीर खाएकै भरमा यस्तो तर्क गर्न मिल्छ र?
पोहोर परार जागिर खाएका थिए, अहिले बिर्सिएर यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बसेको मानिसलाई म भन्न चाहान्छु सर्वोच्चलाई गलत ढंगले गुमराहमा पार्ने, गलत प्रचार गर्ने र धम्काउने कार्य गर्न उहाँहरुलाई सुहाउँदैन।
स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कता जान पर्छ भनेर सिकाउन पर्दैन। सडकबाट तपाईं फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउनुपर्ने हो? संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने केही अजासुहरूले संवैधानिक इजलासले हुँदैन भन्नु भयो। कुन संविधानले भन्यो तपाईलाई हुदैन भनेर? तपाईहरुले जुन इजलास भन्यो त्यही चाहिने भए, जो न्यायाधीश भन्यो भन्यो त्यही चाहिने भए, जे फैसला चाहियो त्यही गर्ने भए अदालत किन चाहियो? अदालत नै चाहिएन। स्वतन्त्र न्यायपालिकको कदर गर्न सिकौँ। नारा जुलुस गरेर अपमानित गर्ने काम नगरौँ। राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि नबोल्ने भाषा बोल्नु भएकै छ।
जनताका बीचमा जाने कुरा लोकतन्त्रविरोधी हुँदैन। हामी ताजा जनादेशमा जाने कुरा गरेका छौँ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेका छौँ। केही दर्जन हुन्डीबाट चलेका विकाउहरूले विभिन्न कुराहरू बोलिरहेका छन्। यी बिकाउ बोलीबाट न्याय प्रभावित हुन्छ भनेर तपाईंहरू नठान्नुस्।
अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन। म बहुमतको नेतृत्वले भनेपछि अर्को विकल्प नै छैन। अब कसरी हुन्छ? बहुमत मसँग छ। ६४ प्रतिशत मसँग भएको अवस्थामा चलाउन सक्दिनँ र प्रभावकारी हुँदैन र नयाँ ताजा जनादेश चाहियो भनेको हुँ। सुकेको रुखले फल दिन्छ भनेर २ वर्ष पालिराख्न हुदैन भनेर ताजा जनादेश भनेको हुँ। कुहिएको फललाई ताजा भनेर रुखमै टास्न खोजेर हुँदैन। वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुन्छ। यही मितिमै निर्वाचन हुन्छ। यसमा कोही पनि साथीहरु भ्रम र अन्योलमा पर्न जरुरी छैन।
अर्को तिर केपी ओलीले चुनाव गर्दैन तानाशाह लगाउँछ भनेर हल्ला गरिएको छ। अनेक पटक मरेर बाँच्दै आएको लोकतन्त्र मास्न होइन, रक्षा गर्न आएको हो। चुनाव १७ र २७ गते नै हुन्छ। एक दिन पनि अघि पछि हुँदैन। हामीले यसपटक चुनावी जनलहर सिर्जना गर्न पर्छ। अन्य तत्वलाई किनारा लगाउनु पर्छ। निराश अनुहार लगाएर प्रचण्डले बोलेको सुनेँ- बैसाशाखबाट केपी ओली सकिन्छ भनेको। यो सुनेर माया लागेको छ। हिजो युद्ध लडेका र साथ दिएका कोही कार्यकर्ता छ? नारायणकाजी युद्ध लडेको मानिस हो र?
केही नेताको काम यताको गोटी यता सारो। दुई चार दिनमा मर्नेलाई के भोट हाल्नु भनेर वहाँले भनेकै हो। कस्तो बोलेको होला कस्तो चिताउन खोजेको होला? म जति पटक उपचार गर्न जान्छु कहिल्यै उज्यालो चेहरा भएन। तन्दुरुस्त भएर आएपछि बत्ती निभेको झैँ। निर्वाचन हारेर प्रधानमन्त्री अरुले छोडे प्रधानमन्त्री हो माधव नेपाल। निर्वाचन हारेलगत्तै मलाई अध्यक्ष लेऊ भनेको है। पर्ख न दिन्छु भन्दा भएन।
अब प्रचण्डसँग माधव नेपाल, नारायाणकाजी छन्। एउटा मौका आएको थियो तर सुध्रन सकेनन्। राजनीतिक विश्वास राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आएको थियो तर गुमाउनु भयो। निलो स्यालझैँ राजा हुँदा बिग्रेको हो।
विघटनको कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन भन्नेहरुका लागि ७६ को ७ उल्लेख गरेको छु। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने छ भनेको छ। ६४ प्रतिशत मसँग छ ३६ प्रतिशतले नयाँ सरकार बन्छ? ५१ प्रतिशत चाहिन्छ। १७४ सिट मसँग भएपछि अरुसँग कसरी विकल्प हुन्छ। जबर्जस्ती नै गर्ने हो भने के भो र? सत्ता छोड्ने अघि संसदमा बसेर गोली हानेको पनि देखिएकै छ? तर जबरजस्ती चल्दैन।
निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो कोही आएनन् किन आइएन सोधीखोजी गर्न पर्ला भनेको एकैपटक माइतीघर मण्डलामा 'हामी यहाँ छौ' भन्नु भयो। सूर्य चिन्ह र पार्टी हामी आधिकारिक हौ भनेर पत्र पठाउनु भएछ। कुन हैसियतमा पठाउनु भयो? केपी ओलीलाई कारवाही गर्‍यौँ भन्नु भयो। मच्छडले कहिलेकाहीँ हात्ती र भैसी पनि खान्छ। कति खान्छ? केपी ओलीलाई निकाल्छु भनेको त्यस्तै हो। मच्छडले छाला पनि छेड्दैन कसरी खान्छ? केपी ओलीलाई निस्कासन गर्छु भन्नु भएको छ कहाँबाट माइतीघर मण्डलाबाट?
गत निर्वाचनमा प्रचण्ड सूर्य चिह्नमा लडेको हो र मेरो हो भनेर दाबी गर्न? एउटा कमेडियन शोमा पठाउनु पर्ने। यो भन्दा मजाक के हुन्छ? पार्टी अध्यक्ष हुन एउटा प्रक्रिया हुन्छ। महाधिवेशन वा पार्टी मिलाउँदा हुन्छ। माइतीघर मण्डलामा गएर पार्टी र अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। यस्तै मजाकले देशको राजनीतिक हाँकिन्छ?
देशलाई घात गर्ने तत्वहरुको गलत तर्कहरुको धज्जी उडाउनुस्। यस पटक पनि हामी जित्छौ। धनगढीको सभामा हेर्नुस देशभर लहर चलेको छ। उनीहरु जनताबाट स्वीकार गरिएको तत्व होइनन्। कहिले हतियार र कहिले कहाँबाट आउनु भएको हो। जनताबाट उहाँहरुको भविष्य देखाइदिनुपर्छ। जनताले उहाँहरुलाई भविष्य देखाउँछ।
हाम्रो पार्टी मधेश विरोधी भनियो तर हिमाल पहाड र तराई जोड्ने गरी धोतीमा जुलुस गरेर ऐतिहासिक काम गर्नु भएको छ। देशको विकास एक ठाउँ वा जातीको मात्र गरेर हुँदैन। हामी बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश भएकाले साझा उद्देश्यले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो। यहाँ पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण सबै अटाउँछ।
तराईंमा डुबाउ हुने समस्या थियो। त्यसलाई रोकेर हामीले सिचाई सुविधा पुर्या‍एका छौँ। चाँदनी-दोधारामा अब सिंचाई पुग्ने भएको छ। रोजगारी सिर्जना कार्य अब सुरु हुनेछ। कृषिको विकास अब तराईमा धेरै हुने छ। चुरे संरक्षण अभियान अघि बढेको छ। यति विकास गर्दा पनि मधेशका माग सुनिएन भनिएको छ। मधेश मधेश भनेर मात्र हुन्छ? ३९६ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर शुरु गरेका ३०९ वटा शिलान्यास भएका छन्। तराईको विकासका लागि अहिलेको सरकार दत्तचित्त छ।
(युवा संघले आयोजना गरेको भेलामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेकपामा जस्तो भाँडभैलो संसारका कुनै पार्टीमा हुँदैन
हामीलाई दन्तबझान गर्ने फुर्सद छैन
विश्व चकित हुने गरी काम भएको छ